Tobacco wrapping fitaovana
wrapping mololo taratasy
PLA polymer REVODE105
FOB Price: US $ 0,5 - 9.999 / Piece
Supply Fahaizana: 10000 Piece / Pieces isam-bolana
REVODE105 dia iray karazana farany PLA izay natao manokana ho an'ny mangarahara straws.
Properties ny REVODE105
PLA resin REVODE105 Testing fomba
Hakitroky (g / cm3) 1.25 ± 0,05 GB / T1033-1986
Mikoriana ketraka tahan'ny (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
Heat nanova mari-pana (℃) 60
Koronosy shrinkage tahan'ny (mirazotra kivy mikoriana tari-dalana) 0,005 ISO294-4: 2001
Koronosy shrinkage (mitsangana kivy mikoriana tari-dalana) 0,003 ISO294-4: 2001
Tensile hery (Mpa) 45-60 GB / T1040-2006
Elongation amin'ny fiatoana (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
Impact hery (Prot / m2, Izod) 3 GB / T1043-2008
Ny PLA resin REVODE105 dia mety ho fanodinana ny hafanana-tsy mahatohitra sy mangarahara straws mahitsy, fa tsy mety ho an'ny curved straws.
Ny REVODE105 resin dia azo tsinjaraina amin'ny nentim-paharazana polypropylene (PP) mololo extrusion koronosy milina. Rehefa fanodinana, mariho tsara:
I: Ny fikarakarana hafanan'ny (ny mari-pana manokana tokony optimisé):
Nafanaina fizarana voalohany (akaikin'ny tendany fahana): 130-150 ℃, ny ampahany hafa: 160-180 ℃ PLA resin REVODE105 manomboka mitsonika amin'ny hafanana mihoatra noho ny 60 ℃, raha ny hafanana ambony loatra amin'ny sakafo mankany amin'ny tendany sy ny unsmooth resin agglomération sakafo, ny nanolorana azy ho haidiny hihena ny rano ho palitao amin'ny fizarana mamahana tenda.
Satria malemy kokoa REVODE105 noho ny nentim-paharazana PP resin, na dia mety handrava faran'ny rehefa nanapaka ny mpitsoka sodina rehetra. Ny nanolorana azy ho hifehy rano mari-pana amin'ny rano fitoeran-tsoliky teo anelanelan'ny 35 sy 40 ℃, antoka ny sodina manana hafanana ambony, rehefa manapaka, dia toy izany no tsy mora famoretana.
II: Color mampifangaro
Raha ny vokatra tokony miloko, ho azo antoka ny mampiasa loko manokana Toner na PLA-monina loko tompony batch. Dratsy Toner na loko batch tompony dia mety hitarika ho amin'ny malemy vokatra, unsmooth vokatra ambonin'ny ary na dia tsy afaka extrude.
Raha loko mampifangaro fitaovana tsy azo ampiasaina ny ao anatin'ny 2 ora, dia soso-kevitra tsy mampiasa 25 kilao / kitapo resin indray mandeha, fa, mampiasa ny antsasany, ary asio tombo-kase ny antsasany amin'ny famehezana mafana fitaovana avy hatrany. Ny tanjona dia ny hampiharihary ny fitaovana ho amin'ny rivotra araka izay fohy araka izay azo atao.
REVODE105 dia ampiasaina ny namaoka crystallization, ary afa-po ny hamandoana dia tsy than400 ppm. Ny resin izay voatahiry ao Aluminium foil kitapo, voaaron'ny boaty na kitapo ivelany dia azo ampiasaina avy hatrany. Tandremo ny nasiana tombo-kase mandra-pahatongan'ny fonosana vonona ny hampiasa avy hatrany reseal sy ara-nofo na maromaro, na ny resin dia mitroka ny hamandoana. Taorian'ny noho, ny resin afaka manolotra ny nitombo mivezivezy nandritra ny dingana, sy ny vokatra mety hanana fananana malemy, surface shrinkage. Raha ny resin hita tao amin'ny rivo-piainana ho an'ny mihoatra ny ora iray, dia tokony ho indray mampiasa maina alohan'ny, raha tsy izany, ny resin azo ampiasaina avy hatrany. Ny mety hisian'ny mitroka ny hamandoana tsy azo ampidirina, raha resin hita ao amin'ny habakabaka avo hamandoana.
Rehefa indray namaoka ny resin, ny Firenena Mikambana-dehumidified rivotra mafana dia voarara, fa tsy misy dehumidifier, tsy-paharitry vokany tsy azo nahazo, fa koa ny hafainganam-pandehan'ny rano absorbance ny PLA resin azo haingana. Ny rivotra dia afaka manome antoka dehumidified-paharitry vokatry ny PLA resin in desiccator. Rehefa mampiasa lafaoro ankapobeny, ny fitaovana dehumidification tokony hampiasaina mba dehumidify ny rivotra ao amin'ny oven.SD-H andian-dahatsoratra ny toho-tantely-kodia-karazana dehumidifiers nanome ny Shini PLA stics Technologies Inc. dia mafy hirotsaka ho PLA paharitry, fitaovana hafa toy izany koa tamin'ny dehumidified vokatry azo voafantina.
Paharitry toe-piainana mahazatra dia ny hita eo amin'ny tabilao eto ambany:
namaoka fikirana miavaka Settings
Residence Time (ora) 2-3
Air Temperature (℃) 80 (Temperature ny lafaoro ara-dalàna)
Air Dew Point (℃) -40 (Temperature ny dehumidifier)
Air Flow Rate (m3 / hr-kilao resin) > 1,85
Manakatona ny manahiran-tsaina ny eo amin'ny farany ambany ny Hopper sy handrendrika ny barika, rehefa fanakatonana ny milina ho an'ny fotoana fohy (ao anatin'ny 30 min), fanalavirana fanakanana ny fahana tenda. Sokafy ny manahiran-tsaina ny ao ka hiandry resin rehefa avy nanamafy indray ny hanomboka ny tsindrona.
Raha loko hanova sy lo nitranga nandritra ny dingana mamolavola, hanadio ny barika avy hatrany mba hitandrina ny toetry ny ara-nofo. Aza mitsahatra nihazakazaka raha toa ny zavatra Ara-dalàna, na hanitsiana ny masontsivana.
Recovery fitsaboana ny fitaovana azo havaozina:
Ny tsy nahay vokatra vokarina any amin'ny dingana famokarana revode105 azo ampiasaina, ary ampiasaina miaraka amin'ny vaovao koa materials.The ohatry ny tsy tokony ho lehibe loatra, raha izany, ny vokatra dia ho malemy loatra.
Ny fitaovana amboarina dia azo tsaboina ao amin'ny fomba roa manaraka ireto:
Ao amin'ny dingan'ny famokarana, dia mivantana comminuted, ary nampita ny Hopper mandeha ho azy amin'ny alalan'ny fitaovana vaovao feeding.The dia mifangaro ampiasaina, fa mila mba hahazoana antoka fa ny siny tsy mari-pana ambony noho ny 60 degre, fa raha tsy izany dia mety ho dity zavatra ( Recommended fomba fampiasana)
Previous: New Arrival China Kraft Slip Sheet Cardboard Plate - High Heat Resistance And High Gloss PLA Resin – FANCYCO
Next: 60gsm White Kraft Paper Roll Fa Paper mololo
Anti Counterfeiting Hologram Thread
Automatic Toothpick fonosana Machine
Baby Cotton tsiry
Baby sofina Cleaning
Biodegradable Plastic Raw Material
Blister kase fonosana Machine
C1s Kraft Liner
ny siligaoma fonosana
Cotton sofina hitsimoka
Cotton Swab tapa-kazo
sofina Cleaning Hazokely Cotton Bud
Full Automatic famonosana Machine
Laser Perforating Machine
salady fonosana Machine
Makeup Cotton tsiry
Natural / Buff Color
ondana fonosana Machine Price
PLA Resin Fa tsindrona Grade
PLA Resin ambony mikasika ny Fahasarotana
Plastic Hazokely Cotton Swab
Polypropylene Fabric tantera-drano
p tenona Fabric
Raw Wood pulp baoritra Gray
Single Toothpick fonosana Machine
kilalaon'afo Plugs famonosana Machine
White Kraft Pape
Wholesale namboarina Printing
divay fonosana Tube
Wooden Plastic Hazokely Cotton Swab
701, NO.8 TRANO, BOJINWAN BEIYUAN, TAIERZHUANG ROAD, Tianjin, CHINE